Mailo ny FJKM ary nanamafy ny hafatry ny FFKM: «Tsy ekena ho fanambadiana ny firaisan’ny mitovy fananahana» | NewsMada
Mailo ny FJKM ary nanamafy ny hafatry ny FFKM: «Tsy ekena ho fanambadiana ny firaisan’ny mitovy fananahana»
Par Taratra sur 21/12/2019
Nivoaka amin’ny fanginany ny eo anivon’ny FJKM manoloana ny tranga niseho tato ho ato. Anisan’izany ny momba ilay rindran-tsary natao tany am-piangonana ahitana mpanankato lahy manambady lahy. Eo koa ny momba ilay lalàna mahabe resaka teny amin’ny Antenimiera.
Mazava ny fitsipika sy ny foto-dalàna, araka ny nambaran’ny filohan’ny FJKM, Andriamahazosoa Irako Ammi, tetsy Vohifiraisana, omaly tamin’ny mpanao gazety. “Tsy ekena ho fanambadiana mihitsy ny firaisan’ny samy lahy na samy vavy”, hoy izy. Nohamafisiny amin’ireo fanambarana tamin’ny synaoda faha-17 tany Manakara, ny taona 2012 sy ny synaodam-pinoana natao ny mey 2018 izany. “Tsy afaka miaraka ny maha kristianina sy ny framasaonery. Tsy afaka miaraka ny maha kristianina sy ny “homosexualite”, hoy ihany izy.
Mazava ny fanambaran’ny FFKM
Manampy izany ny fiombonan’ny FJKM amin’ny fanambaran’ny FFKM tamin’ny komity foibe tany Tsiroanomandidy, ny volana novambra 2018 teo. Mitsipaka marindrano izany ary efa niahiahy ny tranga tahaka izao tamin’izany fihaonambe izany. “Fanambadiana ho an’ny mitovy fananahana : Fahotana sy tsy fanajana ny tenan’olombelona sy ny fanambadiana ary aretina io ka lavin’ny fiangonana. Toy izany koa ny firaisana ara-nofo amin’ireo mitovy fananahana. Lehilahy iray ho an’ny vehivavy iray, araka ny famoronan’Andriamanitra azy no ekena ho mpivady ka tsofin’ny fiangonana rano”, hoy ny fampahatsiahivany. Nanteriny manokana ny hafatrafatra ho an’ireo mpanao lalàna mba tsy hanekena ho lalàm-panjakana io fomba, voizin’ny teolojia liberaly sy ny iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona io.
Tsy maintsy mijoro sy miteny ny fiangonana
Nanampiany izany ny voalazan’ny Soratra Masina. “… Aza mety hofitahina ianareo fa ny sodomita (lehilahy manambady lehilahy ary vehivavy manambady vehivavy), tsy mba handova ny fanjakan’Andriamanitra”, hoy izy. Manoloana izany, niantso ny fanjakana noho ny fitiavana ny tanindrazana iombonana mba tsy hanome vahana ny fanambadian’ny mitovy fananahana ny FJKM.
Niantso ny vahoaka koa ny fiangonana. “ Aoka tsy handraraka ilo mby an-doha nomen’Andriamanitra antsika olombelona noforoniny. Antsom-pitiavana ho an’ireo misedra olana mirona amin’ny fanambadian’ny mitovy fananahana ity mba hananany fanantenana fa misy lalan’ny fahafahana marina ao amin’i Kristy”, hoy ny filohan’ny FJKM.
Namory ireo zanaky ny FJKM…
Notsiahivin’ny fanambarana teo am-panombohana fa mpitily sy mpaminany ny fiangonana ka tsy maintsy mijoro, manaitra ny amin’ny loza mitatao eo amin’ny fiainan’ny firenena. Tsy maintsy miteny amin’ny anaran’Andriamanitra koa.
Nitohy teny Andrainarivo izany, namoriana ireo zanaky ny FJKM manana andraikitra eto amin’ny firenena. Nampitana izany hafatra izany. Eo koa anefa ny ady atao amin’n y kolikoly mahazo faka eto amintsika…